Mahiga oo la kulmay Madaxweynaha iyo Raiisul Wasaaraha - BBC News Somali
Mahiga oo la kulmay Madaxweynaha iyo Raiisul Wasaaraha
Image caption Madaxweynaha Soomaaliya, Guddoomiyaha baarlamaanka iyo Wakiilka Xoghayaha Guud ee QM
Ergayga gaarka ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Augustine Mahiga ayaa tagay maanta magaalada Muqdisho oo uu kula kulmay Madaxweynaha iyo Raiisul wasaaraha.
Kulamadaasi kadib ayaa Raiisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi maxamed oo la hadlayay BBC waxa uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hawsha xilliga kala guurka.
Raiisul Wasaaruhu waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka wada hadleen arrinta dastuurka qabyada ah iyo halka uu marayo, oo uu sheegay in dhawaan ay la kulmeen guddiga madaxa bannaan ee dastuurka oo ay ka codsadeen in soddon maalmood ay ku soo dhameeyaan.
Maqal Falanqayn: Halkuu ku dambeyn doonaa muranka u dhaxeeya Ruushka iyo Britain
Falanqayn: Halkuu ku dambeyn doonaa muranka u dhaxeeya Ruushka iyo Britain
Maqal Beesha caalamka oo ka walaacsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya
Beesha caalamka oo ka walaacsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya
Maqal Faysal cali waraabe oo ka hadlay booqashada imaraatka
Faysal cali waraabe oo ka hadlay booqashada imaraatka
Maqal Macallimiinta Kenya ee isaga baxay gobolka W/bari Kenya
Macallimiinta Kenya ee isaga baxay gobolka W/bari Kenya
Maqal Heshiiska Uhuru iyo Raila muxuu ka bedeli karaa xaaladda siyaasadeed ee Kenya?
Heshiiska Uhuru iyo Raila muxuu ka bedeli karaa xaaladda siyaasadeed ee Kenya?
Maqal Dowladda Soomaaliya oo walaaca ay ka qabto heshiiskii Berbera u gudbisay jaamacdda Carabta
Dowladda Soomaaliya oo walaaca ay ka qabto heshiiskii Berbera u gudbisay jaamacdda Carabta